अधिकतम दुई महिना कैद हुने मुद्दामा हिरासतमै बित्यो ६९ दिन
नारायण अधिकारी बुधबार, असोज १४, २०७७, १७:५१
काठमाडौं- अधिकतम सजाय सुनाउँदा २ महिना मात्रै कैद बस्नुपर्ने हुने एक मुद्दाका दुई अभियुक्तलाई कानुनविपरीत हिरासतमा ६९ राखिएको खुलेको छ।लागुऔषधको एक घटनाका दुई अभियुक्तले भने ६९ दिनसम्म हिरासतमा बस्नु परेको हो। कानुनविपरीत उनीहरूलाई ६९ दिनसम्म हिरासतमा राख‍िएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७८ अनुसार अधिकतम कैद सजाय हुने अवधिभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु कानुन विपरीत हुन्छ। ‘अभियुक्तलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन,’ संहिताको दफा ७८ मा लेखिएको छ।
घटना गत साउन ७ गतेको हो। नारायण गोपाल चोकबाट लाजिम्पाटतर्फ जाने बाटोको बायाँ किनारबाट कर्मा भन्ने सोनाम लामा र किसन कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दिउँसो साढे ४ बजे बा ३३ प ४८१३ नम्बरको भिआर मोटरसाइकलसहित पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट प्रहरीले ०.५ ग्राम लागुऔषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको थियो।
पक्राउ परेका कर्माले प्रहरीसँगको बयानमा आफूले लागुऔषध खैरो हिरोइन सेवन गर्न थालेको ८/९ महिना भएको बताएका थिए। किसन र कर्मा मिलेर लागुऔषध सेवन गर्न थालेका थिए।
पहिला सुदीप लामा भन्ने व्यक्तिसँग खरिद गरेर खैरो हिरोइन सेवन गर्न थालेको र उनले महँगो मूल्य लिन थालेपछि कपिल भन्ने व्यक्तिमार्फत् राजकुमार लामासँग किनेर सेवन गर्न थालेको उनीहरुको बयान छ।
राजकुमार लामालाई ९ ग्राम खैरो हिरोइन ल्याइदिनु भनेर ५० हजार रुपैयाँसमेत दिएको प्रहरीले दाबी गरे पनि अदालतसमक्षको बयानमा भने उक्त ५० हजार रुपैयाँ सापट दिएको कर्माले बताएका छन्।
पक्राउ पर्ने दिन (साउन ७ गते)भने आफूसँग लागुऔषध नभएकाले किसनलाई सम्पर्क गरेर खैरो हिरोइन ल्याउन भनेको कर्माको भनाई छ। किसनले ल्याएको खैरो हिरोइन सेवन गर्न लाग्दा उनीहरू दुवैजनालाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
कर्मा र किसनकै बयानको आधारमा खैरो हिरोइन बेचबिखन गर्ने राजकुमार लामा, सुदीप लामा भन्ने धनबहादुर जिम्बा र कपिल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो।
यी ५ जनामध्ये कर्मा भन्ने सोनाम लामा, किसन कार्कीलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (छ) कसुरमा सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरियो। अर्थात् उनीहरू लागुऔषध सेवनकर्ताको भएको भन्दै सोही बमोजिम सजाय माग गरिएको थियो।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार सेवनकर्तालाई अधिकतम २ महिनाभन्दा बढी सजाय नहुने व्यवस्था छ। दफा १४ को (ज)मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागुऔषध वा मनोद्दीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) र तिनको लवण र अन्य पदार्थ समेतको दुर्व्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने।’
कर्मा र किसनले लागुऔषध सेवन गरेको पुष्टि भएमा अधिकतम २ महिना मात्रै कैद हुन सक्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनीहरुको हकमा भने दोषी प्रमाणित भएमा कैद बस्नुपर्ने सजायभन्दा बढी समय अर्थात् ६९ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालत काठमाडौं उपस्थित गराइएका कर्मा र किसनको हकमा दोषी ठहर भएमा बस्नुपर्ने सजाभन्दा बढी हिरासतमा बस्नु परेको भन्दै उनीहरुलाई हाजिरीजमानीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोमबार (असोज १२ गते) उनीहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। भट्टराईको इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘कर्मा र किसनको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा ७८ आकर्षित हुने भएकोले दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राख्नू भनी संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिएको छ।’
अर्थात् उनीहरुले लागुऔषध सेवन गरेको र सो कसुरमा अधिकतम २ महिना कैद सजाय हुने भएकाले उनीहरूले हिरासतमै ६९ दिन बिताइसकेको हुँदा रिहा हुन आदेश दिएको हो।
कसरी भयो यस्तो?
दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा २ महिना कैद बस्नुपर्ने व्यक्ति ६९ दिनसम्म कसरी हिरासतमा बसे भन्नेबारे हामीले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसँग सोधपुछ गरेका छौं। ब्यूरोका प्रमुख एसएसपी दीलिपकुमार चौधरीले कोरोनाका कारण यस्तो हुन गएको बताए। उनका अनुसार पक्राउ परेका कर्मा र किसनको कोरोना जाँच गराउँदा संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि यस्तो भएको हो।
‘हामीले पक्राउ गरेपछि कोराना जाँच गराउँदा कोरोना पुष्टि भयो। त्यो समय उनीहरु आइसोलेसनमा बसे। अदालतले पछि व्याख्या गर्दा आइसोलेनको समय समेत गणना गर्दा यस्तो भएको हो,’ नेपाल लाइभसँग एसएसपी चौधरीले भने।
सरकारी वकिल भन्छन्- कोरोना संक्रमितको बयान र सहीछाप कसरी गराउने?
यो मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सरकारी वकिल उमाकान्त पौडेलले गरेका हुन्। उनीसँग यस विषयमा गरिएको कुराकानी यस्तो छ।
कारोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यस्तो भएको हो। कारोना पुष्टि भएका बिरामीको मिसिल अदालतले बुझ्दैन। यी दुई अभियुक्तको कोरोना लागेको २० दिनपछि कारोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो। तर कारोना पोजेटिभ देखिनुभन्दा अघि नै मुद्दा अदालतमा पेस भएको थियो।
अदालतले उनीहरुलाई कोरोना नेगेटिभ आएपछि मात्रै बयान गराउँदा यस्तो समस्या आएको हो। कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कसले बयान गर्ने? आदेश कसरी गर्ने, सही छाप कसरी गराउने? ल्याप्चे कसरी लगाउने? यो प्रक्रिया पनि जटिल नै छ। नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसमम कोर्टले बयान गराउँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरी लामो समय बस्नु परेको हो।
अर्कोतर्फ उनीहरुसँग थप तीन जना पनि पक्राउ परेका थिए। यी दुई जनालाई लागुऔषध सेवनको कसुर लगाइएको थियो अर्का तीन जनालाई भने किनबेच। यो संयुक्त मुद्दा भएकाले दुई महिना कैद हुनेमा त्योभन्दा बढी हिरासतमा राखियो भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। किनभने जुनसुकै लागुऔषध मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।